Azikho iipasipoti ze-COVID-19, akukho zitshixo zeKrisimesi zeGreat Britain
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Azikho iipasipoti ze-COVID-19, akukho zitshixo zeKrisimesi zeGreat Britain
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Indoda esongelwe kwiflegi yaseDenmark ime eAmalienborg Palace Square, apho abantu bacule ukuphawula iminyaka engama-80 yokuzalwa kukaKumkanikazi waseDenmark uMargrethe II, eCopenhagen, ngo-Epreli 16, 2020. -Abantu kwilizwe liphela banokucula kunye kwiibhalkhoni, ngaphandle kweefestile. , egadini okanye emsebenzini. Ukubhiyozelwa kweminyaka engama-80 yokuzalwa kukaKumkanikazi uMargrethe kwarhoxiswa ngenxa ye-COVID-19, uloyiko losulelo lwe-coronavirus. (Ifoto ngu-Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Ifoto ngu-NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix / AFP nge-Getty Images)
Umphathiswa Wezempilo wase-Bhritane uSajid Javid uxelele umphathi we-BBC uNick Robinson ukuba emva kokuphononongwa ngalo mbandela, urhulumente ebengalindelanga ukuba kungabikho zinto zingaphaya ngexesha leholide-ngokungafaniyo nonyaka ophelileyo xa iintsapho zase-UK zaxelelwa ukuba zihlale zodwa ngaphandle kweeholide. kwaye bhiyozela phantse.
Umphathiswa wase-UK ubhengeza ukuba akukho mapasipoti e-COVID-19 eBrits.
Iholide zeKrisimesi zitshixiwe kungenakwenzeka e-UK, utshilo umphathiswa.
Ngama-66% abahlali base-UK abagonywe ngokupheleleyo ngoku.
Ngexesha lokuvela izolo kumdlalo we-BBC, Umphathiswa Wezempilo e-UK uSajid Javid uthe urhulumente wase-Bhritane akazukuzisa iipassport ze-COVID-19 kwaye iBrits "izakufumana iKrisimesi" kulo nyaka.
Umphathiswa Wezempilo uJavid uxelele umphathi we-BBC uNick Robinson ukuba emva kokuphononongwa ngalo mbandela, urhulumente ebengalindelanga ukuba kungabikho zinto zingaphaya ngexesha leholide- ngokungafaniyo nonyaka ophelileyo xa iintsapho zase-UK zaxelelwa ukuba zihlale zodwa ngeeholide kwaye zibhiyozela phantse.
UJavid ubhengeze ukuba "akalindelanga ukuba kungabikho zinto zingaphaya" ngexesha lasekwindla nasebusika, esithi "akaboni ukuba sifikelela njani kolunye uvalo." Umphathiswa wongeze, nangona kunjalo, esithi "ayizukuziphatha kakuhle kuye nawuphi na umphathiswa wezempilo kwihlabathi liphela ukuba asuse yonke into etafileni."
BaseBrithani UMphathiswa wezeMpilo UJavid ukwabhengeze ukuba urhulumente uzakusilahla isicwangciso sakhe sokwazisa ikhaya Ipasipoti yokugonya ye-COVID-19, ubuncinci okwangoku.
"Akufanelekanga ukuba senze izinto ngenxa yoko okanye ngenxa yokuba abanye besenza," watsho uJavid, esithi "abantu abaninzi abayithandi into yokuba" babonise amaxwebhu okwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
"Into endinokuyithetha kukuba siyijonge ngokufanelekileyo, kwaye ngelixa kufuneka siyigcine njengendawo esinokukhetha kuyo, ndonwabile ukuthi asizukuqhubela phambili nezicwangciso zepasi zokugonya," utshilo. .
Emva kokuba umphathi weBBC ebonakalisile ukuba abaphathiswa abaliqela- kubandakanya nomphathiswa wezokugonya we-COVID-19, uNadhim Zahawi - wayethe kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo ukuba iipasipoti zokugonya ziya kumiliselwa kungekudala kwaye iyinto elungileyo ukuyenza, uJavid wayikhaba Isindululo sokuba u-U-ujike wenzekile ekuphenduleni kwimvukelo, ekuchaseni isithintelo se-Conservative Party ye-backbencher MPs.
"Amazwe amaninzi ngela xesha babephumeza yayikukuzama nokunyusa amazinga abo okugonya kwaye ungasiqonda isizathu sokuba benze njalo," ucacisile uJavid. "Siphumelele kakhulu ngeqondo lethu lokugonya ukuza kuthi ga ngoku."
Kukho abantu abazizigidi ezingama-43.89 e-UK abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19, ngelixa i-48 yezigidi ifumene idosi enye, ngokweenkcukacha-manani zikarhulumente.
Ngokwedatha yamva nje, i-66% yase-UK igonywe ngokupheleleyo, iyenza ilizwe le-17 lelona ligonyiweyo lilonke.